XOG+AKHRISO: M/weynaha Jabuuti & Ergayga gaarka ah ee QM oo wada hadal ku saabsan Tukaraq yeeshay, Maxayse isku afgarteen? – Puntlandtimes
XOG+AKHRISO: M/weynaha Jabuuti & Ergayga gaarka ah ee QM oo wada hadal ku saabsan Tukaraq yeeshay, Maxayse isku afgarteen?
JABUUTI(P-TIMES)- Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle iyo Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay ee qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa wada hadalo ku saabsan xaaladda dagaalka gobalka Sool ee u dhaxeeya Puntland & Somaliland, waxay kaga wada hadleen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa.
Wada hadalkan oo ka dhacay magaalada Jabuuti, ayaa Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya, wuxuu kala hadlay Ismaaciil Geelle in uu ku qanciyo dhinacyadu in ay si deg deg ku aqbalaan wada hadal aan waxba sharuud ah ku xirneyn.
Laakiin Geelle oo inta badan lagu xanto in u daraf ka yahay qadiyaddan, ayaa ugu baaqay Puntland & Somaliland in ay aqbalaan wada hadal, ayna joojiyana dhamaan talaabo kasta oo lagu dhameyn karro dagaal cusub oo dhaca.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu fahansan yahay in dhaawacyadii ugu dambeeyey ee Somaliland ka soo gaaray dagaalkii Tukaraq ay hadda ku jiraan qaar kamid ah Isbitaalada magaalada Jabuuti, sidaas oo kale saanad xoog leh ay Jabuuti siisay Somaliland.
Lama garanayo sidda Ismaaciil Cumar Geelle dhexdhexaadin uga dhex sameyn karro xaaladda gobalka Sool, waqti uu garab la safan yahay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanadaas, waxaana wararku sheegayaan in xaaladdu ay hadda sii kordhayso.